Guud ahaan dunida tirada kiisaska la xaqiijiyay ee Covid-19…
In ka badan shan milyan oo qof oo adduunka ah ayaa maanta la xaqiijiyay in ay qabaan cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’ cusub, sida laga soo xigtay xogta ay soo aruurisay Jaamacadda Johns Hopkins. In kabadan 328,000 oo qof ayaa ku dhintey adduunka halka qaar 1.9 milyan oo qof ay soo kabsadeen.
Dalka Brazil ayaa lagu wadaa in uu yeesho tirada labaad ee ugu badan adduunka iyadoo Wasaaradda Caafimaadka ay ku warrantay 888 dhimasho ah oo cusub iyo ku dhawaad ​​20,000 kiis oo cusub hal maalin gudaheed, taasoo guud ahaan ka dhigaysa 291,579 iyo ku dhawaad ​​19,000 oo dhimasho ah.
Hay’ada Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa ku soo warramey in adduun dhan 106,000 xaaladood, oo ah tii ugu sarreysey maalin keliya, taas oo sare u qaadeysa welwelka laga qabo faafitaanka COVID-19 ee waddamada saboolka ah.
Magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha oo ah halka uu ka soo bilaawday cudurka faafa ee coronavirus ayaa laga soo saaray amar guud ahaanba lagu mamnuucida ugaarsiga, taranka iyo cunista dadka ee xayawaanka duurjoogta ah.
Qaarada Afkari iyo Covid-19.
In ka badan laba bilood ka dib markii Masar ay noqotay waddankii ugu horreeyay ee Afrika ee xaqiijiya kiis la yaqaano “coronavirus”, faafitaanku wuxuu gaaray waddan kasta guud ahaan qaaradda oo ay ku nool 1.2 bilyan oo qof.
Laga soo bilaabo bishii Maajo 21-keedii, tirada la xaqiijiyay ee dhimashada coronavirus ee qaaradda ayaa ahayd 2,997, iyada oo dadka dhintey ay ka mid yihiin hogamiyihii hore, Siyaasiyiin, laxamaystayaal iyo dadkale oo qaarada dhexdeeda caan ka ahaa.
In ka badan 95,201 ayaa la xaqiijiyay in ay qaadeen xanuunka iyo 38,075 soo kabasho, sida laga soo xigtay Xarunta Xakameynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Afrika.
Guud ahaan caalanka kiisaska Coronavirus ayaa oo Khamiis ah gaartay 5,105,897, halka dhimashadu marayso 330,003 qof iyo 2,035,432 ruux oo ka soo kabsatay Xanuunkaan oo markii hore ka soo bilaawday bartamaha Shiinaha sanadkii December 2019.